Cusboonaysiinta Moobilka ee PUBG 1.3 Fariimaha Patch | Androidsis
Cusboonaysiinta cusub 1.3 ee Mobile PUBG ayaa hadda la heli karaa, oo kuwan oo dhammu waa wararka ku saabsan balastarka
Haaruun Rivas | | Noticias, PUBG Mobile
PUBG Mobile waxay isu diyaarineysaa inay soo afjarto Royale Pass 17. Iyadoo tan la adeegsanayo, ayay bilaabeen cusbooneysiinta cusbooneysiinta cusub 1.3 ee dagaalka royale, waxaana jira warar badan iyo horumarin horeyba loo heli jiray.
Cusboonaysiinta ayaa hadda laga heli karaa iyada oo loo marayo Play Store iyo Waxay leedahay miisaan qiyaas ah 640 MB aaladaha Android. Waa kuwan qoraallada balastarka adiga kuu ah.
PUBG Mobile Cusboonaysiinta Patch 1.3 Changelog, Maxaa Cusub, iyo Kobcinta
Boqol habdhaca rhythms (laga bilaabo Maarso 9)
Boqol Rhythms ayaa yimid Erangel, xafladdu waxay ka bilaabmaysaa xafladda muusigga elektaroonigga ah. Armband Music wuxuu bixiyaa 3 awood gaar ah. Xulo xirfadda kugu habboon adiga, kor u qaad xirfadda adoo soo ururinaya cajalado kala firdhisan oo xukuma goobta dagaalka adoo kaashanaya xirfaddaada. Ka dooro Erangel shaashadda xulashada khariidadda si aad ula kulanto qaab ciyaareedkaan gaarka ah.
Gameplay khiyaano Clown (Laga bilaabo Maarso 31)
Qosollayaashu waxay yimaadeen Fagaaraha Sannadguuradii Sannad-guurada waxayna ku xardhan yihiin qoraallo meesha oo dhan. Gawaarida ka socota dukaanka clown ayaa la dhigay halkan Erangel. Ciyaartooydu waxay soo ururin karaan astaamaha qosolka leh waxayna ugu beddeli karaan shey sida qalabka dagaalka ee caadiga ah iyo agabyada istiraatiijiyadeed ee gaarka ah ee gaariga dukaanka clown ah.
Ciyaartoydu waxay soo ururin karaan astaamaha qosolka leh waxayna ku beddeli karaan waxyaabaha istiraatiijiga ah ee soo socda gaariga dukaanka clown: macluumaadka ku saabsan aagga ciyaarta ee ku xigta, hawada soo socota, iyo cufnaanta cadawga ee khariiddada.
Gidaarka darbiga muusikada
Darbi ka mid ah qoraallada muusigga ayaa ka soo muuqan doona agagaarka Fagaaraha Graffiti ee ku yaal Jasiiradda Spawn ee qaabka Erangel ee caadiga ah. Ciyaartoydu waxay ku buufin karaan rinjiga darbiga Music Graffiti, iyagoo kicinaya qoraalo ay ku ciyaaraan marka rinjiga lagu buufiyo fagaarayaasha. Fagaare kastaa wuxuu u taagan yahay qoraallo kala duwan oo isku laxan ah. Ku buufi rinjiga dhowr jibbaarane si aad ugu hawlgeliso qoraalo badan.
Metro Royale: Daboolida (la heli karo Maarso 9)
Metro Royale: Daah furka ayaa la heli doonaa ka dib marka ciyaarta la cusbooneysiiyo.
Abaalmarinta cusub waxaa lagu heli doonaa cutubka ugu dambeeya.
Cadowyo caan ah oo dheeri ah ayaa si lama filaan ah uga soo muuqan doona furimaha dagaalka.
La baabi'iyay wuxuushkii Metro Exodus iyo qorigii Tikhar, wuxuu cadawga ka dhigay mid caqli badan, wuxuuna wax ka bedel ku sameeyay dheelitirka kooxda.
Hagaajinta khariidadaha kale
Kadib cusbooneysiinta nooca, qaabka Awoodda Awoodda ayaa la heli doonaa Jimco kasta, Sabti iyo Axad.
Hubka: Mosin-Nagant Toogte Qoriga:
Mosin-Nagant waa 7,62mm qoriga toogashada ficilka ah oo u xoog badan sida Kar98K.
Si kastaba ha noqotee, rasaastoodu si dhakhso leh ayey u duushaa oo ay u yaraataa dhibkeeda. Waxaad ku dhufan kartaa cadaw aan hubaysnayn hal xabbad oo aad ka fogtahay.
Mosin-Nagant ayaa ka soo muuqan doona Erangel iyo Vikendi, isagoo badalaya qaar ka mid ah qoryaha Kar98K.
Baabuur - Gawaarida Gawaarida:
Power Gliders hadda waxaa laga heli karaa Erangel iyo Miramar. Waxay si kadis ah uga muuqan doonaan labadan khariidadood.
Gawaarida Gawaarida waa 2 qof oo gawaari ah oo ka kooban kursi hore oo duuliyaha ah iyo kursi gadaal ah oo rakaab ka soo ridi karo.
Si uu u duulo, duuliyuhu waa inuu ku riixaa batoonka fuulida si uu kor ugu qaado sanka kadib markii Gawaarida Gawaarida ay ku helaan xawaare ku filan.
Isticmaalka shidaalka ee Glider Engine wuxuu si toos ah ula xiriiraa xawaaraha mishiinka. Sida ugu dhakhsaha badan ee aad u duuleyso, shidaalkaaga ayaa sii badanaya.
Horumarinta waxqabadka aasaasiga ah:
Caqli galinta muujinta dhulka ee la hagaajiyay ee dagaalka loogu talagalay aaladaha dhamaadka-hoose si loo yareeyo khasaaraha.
Xulashada xulashada dagaalka walxaha xanibaya dhulka ee aaladaha dhamaadka-hoose si loo yareeyo qasaaraha bixinta marka kamaradu socoto.
Guud ahaan macquulka cusboonaysiinta UI ee dagaalka si weyn ayaa loo hagaajiyay si loo yareeyo waqtiga cusbooneysiinta UI.
Dib udhaca dib udhaca ah ee kiciya ka dib markii ciyaaryahan uu ka boodo diyaaradda.
Khasaaraha guud ee ka baaraandegista kheyraadka, sida cirka iyo badda, ayaa la dhimay si ciyaarta ay u socoto si habsami leh.
Xalliyay arrin sababtay in ciyaartu ay burburto markii MSAA iyo HDR lagu kartiyeelay qalab iOS 14.3 ah.
La hagaajiyay ka saarista ilaha maxalliga ah ee aan sida aadka ah loo isticmaalin si loo banneeyo boosas badan.
Xalliyay arrin meesha kheyraadka qayb ahaan la soo dejiyey ay ahayd in si buuxda loo soo dejiyo ka hor inta aan laga saarin.
La wanaajiyay saxnaanta habka beddelaadda Dib-u-eegista Fiidiyowga iyo soo bandhigga balastikada iyo gawaarida si ay ugu fududaato dadka isticmaala inay gaaraan xukunnada.
Dhowr algorithms-ka wax lagu barto mashiinka ayaa lagu daray si loo aqoonsado loona shaandheeyo dhaqanka ciyaarta laga shakiyo.
Tirada xubnaha kooxda ee dib u eegista ku sameeyay ayaa sii waday inay kordhaan si loo hubiyo amniga kulamada heerka sare iyo tartamada.
Waxay sii waday inay xoojiso difaaca cayaaraha ee kahortaga weerarada DDoS ayna balaariso daboolida talaabooyinka difaaca si loo hubiyo hawlgallada cayaaraha ee xasiloon.
Horumarinta khibradaha aasaasiga ah:
Iswaafajinta Xasaasiga ah ee Degdegga ah: Ciyaartoydu hadda way furi karaan ikhtiyaarka UI si ay si dhakhso leh ugu hagaajiyaan xasaasiga goobaha tababarka.
Qari koofiyadaha ciyaaraha.
Qalabka codka Mk14.
Xalka janjeera kamaradda.
Hagaajinta nidaamka kale:
Guusha Halyeeyga Cusub: Ku Ciyaar XNUMX Rhythms Erangel.
Farshaxanka Cusub ee VI-ga ah: Ururi 300 oo dhar quraafaad ah.
Doorka maareeyaha fariinta
Inta badan fariimaha nidaamka waxaa lagu soo bandhigi doonaa maareeyaha fariinta. Ciyaartoydu waxay u adeegsan karaan maareeyaha farriinta si ay u arkaan farriimaha nidaamka si cad oo jaleecsan ama si habboon ugu taga bogga farriimaha nidaamka u dhigma si ay ula macaamilaan ogeysiisyada
Muusikada Muusikada PUBG
Ku darista soo gelinta astaantan booska ciyaaryahanka.
Ciyaartoydu waxay u adeegsan karaan qaabkan si ay u dhagaystaan ​​heesaha oo ay u dejiyaan muusikada asalka u ah booskooda.
PUBG Mobile waxay heshay xuquuqda lahaanshaha oo dhan dhamaan muusikada la dhageysan karo.
Ciyaartoydu waxay hadiyado u siin karaan asxaabtooda buuxisa shuruudaha hadiyadda.
Freebies ku saabsan casriyaynta goobta
Xayiraadaha qaarkood ayaa la saaraa bixinta hadiyado qaarkood booska si looga hortago in muuqaalkan lagu xadgudbo si loo kordhiyo caannimada.
Qoraal cusub oo xasaasi ah oo firfircoon oo leh saameyn muuqaal ah oo muusig ugu dhejinaya masaafo dhow.
Xilliga Royale Pass 18: HUNDRED RHYTHMS (Laga bilaabo Maarso 17)
Waxaa jiri doona shaashadda muusiga mawduuca sannad-guurada 2aad iyo abaalmarinno. Ciyaartoydu waxay dooran karaan abaalmarinno darajooyin ah laba jeer markay ku sii socdaan Royale Pass. Ka dib xafladda sanadguuradu markay bilaabato, martida qaaska ah ayaa waliba soo bandhigi doonta. Marka lagu daro dhammeystirka 'AUG', ciyaartoydu waxay sidoo kale kala dooran karaan 1 nooc oo horumarsan oo ah Darajada 50aad iyo Darajada 100aad. Darajada 98, waxaad ka heleysaa Muusikada Muusikada ee loo yaqaan 'Violin Music Set' iyo dhammaystir dhammaystiran oo KarXNUMXK ah!
Dhacdo xiise leh ayaa ka bilaaban doonta muusikada. Kuuboonada Tacliinta waxaa lagu daray Abaalmarinta Abaalmarinta Bilaashka ah, ciyaartoyduna way u adeegsan karaan inay ku soo furtaan 1 ka mid ah 2 dharka laba jeer bogga dhacdada. Adventure ayaa sugeysa.
Dhacdada Xidhmada Waxqabadka RP waxay bilaabmaysaa xilli ciyaareedka cusub.
Cilado kale oo la hagaajiyay oo saameynaya ergooyinka iyo waxyaabaha kale si loo wanaajiyo khibradda ciyaaryahanka.
New Cheer Park Theme: Sannad-guurada Sannad-guurada Muusikada
Fagaaraha ay ciyaartoydu ka soo muuqdaan ee Cheer Park ayaa hadda ah aagag elektaroonig ah oo muusig ah oo DJ ah oo leh masrax DJ ah, mashiinka muusikada arcade, iyo teknoolojiyadda. Kadib dabaaldega sanadguuradu markay bilaabato, heeso cusub oo DJ ah, heeso qaraami ah oo qadiimi ah, heesaha mawduuca PUBG MOBILE, iyo heesaha muusikada elektaroonigga ah ee BP ayaa si kadis ah loo ciyaari doonaa.
Melee muujinta hubka
Ciyaartooydu hadda waxay dooran karaan inay isku mar ku soo bandhigaan qori iyo hub meleeyaha gudaha hoolka.
Haddii shuruudaha soo socda la buuxiyo, qoryaha fudud iyo hubka fudud ee ay ku soo bandhigaan ciyaartoydu hoolkooda waxaa loo isticmaali karaa Jasiiradda 'Spawn Island'.
Dhammaan qoryaha iyo hubka fudud ee ay ciyaartoydu ku haystaan ​​Jasiiradda Spawn Island waa laga takhalusi doonaa markay raacayaan diyaaradda.
Shuruudaha hub looga keenayo Xarunta:
Qoryaha: Waa in lagu qalabeeyaa halyeeyga Legendary ama ka sareeya, laakiin xaaladdan ma khuseyso hubka dhifka ah ee la casriyeyn karo, oo waliba la keeni karo.
Hubka Melee: Waa in lagu qalabeeyaa Epic dhammeeya ama ka sareeya.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Cusboonaysiinta cusub 1.3 ee Mobile PUBG ayaa hadda la heli karaa, oo kuwan oo dhammu waa wararka ku saabsan balastarka
WhatsApp wuxuu kuu ogolaanayaa inaad u dirto fariimo is dilaya 24 saac gudahood
Sony IMX789 dareeraha inuu ku soo baxo OnePlus 9 wuxuu la yimaadaa 4K duubista fiidiyowga ee 120fps